दैनिक कति पटक कफि पिउने ? – Everest Times News
२०७४ जेष्ठ १२, शुक्रबार ०७:३३
तपाईं कफी पिउन कत्तिको सौखिन हुनुहुन्छ ? हुनुहुन्छ भने याद गर्नुस एक दिनमा चार कपभन्दा बढी नपिउनुस । बढी कफी पिउँदा निद्रा लाग्दैन । र, मानसिक तथा शारीरिक समस्या पनि बढाउन सक्छ । यसले मानिसलाई डर पैदा गर्ने र मुटुको धड्कन रोक्ने सम्भावना पनि बढाइदिन्छ ।